Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iiwayini kunye neMimoya » Sela iwayini ngakumbi. Uncedo lokukhulisa uqoqosho lwehlabathi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • inkcubeko • iindaba • Tourism • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iiwayini kunye neMimoya
Sela iwayini ngakumbi
Unyaka wawungu-2020, kwaye mna, phakathi kwabanye, ndichithe i-US $ 326.6 yezigidigidi kwiwayini. Ngombulelo kubhubhane, thina baseli bewayini sifumana intuthuzelo ngokusela iwayini engaphezulu, sityhala ingeniso kwi-US $ 434.6 yezigidigidi ngo-2027, emele ukwanda kweepesenti ze-4.3 phakathi kwe-2020-2027.
I-US imele intengiso yewayini eqikelelwa kwi-US $ 88 yezigidigidi (2020) ngelixa i-China (uqoqosho lwesibini ngobukhulu emhlabeni) kuqikelelwa ukuba ifike kwi-US $ 93.5 yezigidigidi ngo-2027.
I-Japan ne-Canada ziqikelelwa ukuba ziya kukhula nge-1.3 yeepesenti kunye ne-3.1 yeepesenti ngokulandelelana phakathi kwe-2020-2027.
IJamani inokuthi ikhule malunga neepesenti ezingama-2.2 ngeli xesha.
Iwayini zedessert (okt, Sauternes / France; Tokaji Aszú / Hungary; Muscat / Italy) ludidi olukhulayo e-USA, Canada, Japan, China nase Europe kwaye kulindeleke ukuba ikhule nge-2.8 yepesenti. Ezi ntengiso zengingqi zimele ubungakanani bemakethi ye-US $ 43 yezigidigidi (2020) kwaye kunokwenzeka ukuba ikhule iye kwi-US $ 53 yezigidigidi ngasekupheleni kuka-2027 (businesswire.com).
Ngelixa ezinye iivenkile kufuneka zivalwe ngenxa yobhubhane, phantse isinye kwisithathu sikwazi ukuthengisa ngcono kunonyaka ophelileyo. Abavelisi abakhulu bahlanganisana kwaye baphucula isakhono sabo sokufaka iwayini ezibhotileni, kwiishelufa nasezandleni zabathengi.
Imiceli mngeni yokuthengisa kunye nokusasaza ibininzi: Abavelisi beprimiyamu kunye nabathengisi bezinto zokunethezeka bebengasenazo iivenkile zokutyela kunye neehotele, amagumbi okungcamla avaliwe, kwaye abavelisi abakhulu babemfutshane kwimveliso ukuhambisa kwakhona kwivenkile yokutya nakwiivenkile. Unxweme olusentshona lwafumana imililo eyaqala eCalifornia yaza yanwenwela kuMazantsi eOregon etshabalalisa amakhulu amawaka eetoni zeediliya kula mazwe.
Iindaba ezimbi zazilungelelaniswe ziindaba ezimnandi nge-avareji ye-winery yosapho yokurekhoda intengiso ye-intanethi inyuka ukusuka ngaphantsi kwepesenti enye yentengiso ukuya ngaphezulu kwepesenti ye-1 yentengiso iyonke. Iivenkile ezinolwalamano oluhle nabathengi zazifumana iifowuni zemveliso kunye nokuthengiswa kweefowuni kwaba ngumthombo obalulekileyo wengeniso phantse ubusuku bonke ngentengiso yevidiyo yedijithali ethatha indawo yamava abo.
Imiba eqhubekayo kushishino ngokubanzi ayizange inyamalale. Intshukumo yokulwa notywala iyaqhubeka, abathengi abancinci abanempilo iqhubeke nokuhlala ecaleni, kwaye ukungabikho kotyalo-mali kwintengiso yedijithali kuyaqhubeka kufuna ingqwalaselo. Kukwakho neenkxalabo ngamaxabiso anyukayo ezinto ezomileyo, ukunqongophala kwempahla kuyo yonke ibhodi, amaxabiso kunye nokunyuka kwexesha lokuhanjiswa kweebhotile zeglasi, iikreyiti zomthi, iibhokisi kunye neepelethi.
Abanye abathengisi bacela abathengi ukuba batshintshe kwiinkuni baye kwikhadibhodi; Nangona kunjalo, kukho uxinzelelo kwiphepha nakwikhadibhodi xa kufikwa kumaxesha amisiweyo kunye namaxabiso. Kwezinye iimeko, izinto ezingafunekiyo ziye zanda ngeepesenti ezingama-50. Abavelisi beglasi banciphise isantya semveliso kwi-2020, kwaye abalindelanga ukubuyela kwimeko yesiqhelo nangaliphi na ixesha kungekudala. Ngama-boomers athatha umhlala phantsi ngenxa ye-Covid, isidingo sokufaka amadoda nabafazi abancinci ukuba babe ngabathengi bewayini siye sabaluleke kakhulu.
Ukuqaqamba kweBhola yeCrystal
Kukho ikamva eliqaqambileyo kumzi-mveliso we wayini, nangona kunjalo, inyani yendawo yentengiso enesidima kufuneka ziqwalaselwe. Ukusuka ngo-2020 ukuya phambili, abantu abaninzi bazakusebenza emakhaya, abathengi bazakufudukela kumadlelo kwaye ezi ndlela zikhulayo zithetha ukuba ukuthengwa kwi-Intanethi kuya kubasusa abathengi kwezinye iindlela ezikhoyo. Ukuthengiswa kwendawo yokutyela kuya kubuya njengoko izithintelo ziya zingaphantsi komthetho kunye nabemi abaxhasa ukutya ngaphandle; nangona kunjalo, ukulinda ukubuya kwabakhenkethi kuya kuthatha umonde. Iindawo zokutyela kusenokwenzeka ukuba ziyile inkonzo ngokutsha, zishenxisa imodeli ehleliyo yeenkonzo ezizeleyo ukuya kwizicwangciso ezitsha zokwenza ingeniso ngakumbi ukuhanjiswa kwekhaya kunye neemodeli zendlela yokuhamba; Nangona kunjalo, ezi fomathi azikhuthazi ukuthengiswa kotywala kukhokelela kwiindawo ezininzi zokutyela ukunciphisa uluhlu lwewayini kunye nokwenza iminikelo ngokulula.
Iindawo zokutyela ezincinci ezizimeleyo zibethwe kakhulu kwaye ziyeyona ndawo iphambili yentengiso yewayini eveliswa ziivenkile zewayini ezincinci zosapho. Iindawo zokutyela eziphumeleleyo beziqhutywa nge-drive-thru, i-curbside pickup kunye / okanye i-odolo esekwe kusetyenziso kunye nokuhanjiswa kwekhaya (okt, ii-pizza, i-delis, iilori zokutya, ukutya okukhawulezayo kunye neevenkile zekofu). Awona maxabiso makhulu okuvalwa kwevenkile yokutyela ayekwizithili ezinezindlu eziphezulu zasedolophini (eCarlifonia, eNevada, eHawaii) kwaye ngokwe-Yelp, iipesenti ezingama-61 zokuvalwa kweendawo zokutyela ziya kuhlala zisisigxina; Nangona kunjalo, inkunzi entsha inokuthi ivele kubarhwebi abaza kuqala ukuqala kwaye, kwisithuba seminyaka emi-4 ukuya kwemi-5, ngokuthe ngcembe bathathe indawo yeepropathi ezivaliweyo ngokusisigxina.
Kukho ithemba lokuba oorhulumente besixeko bazakuqhubeka nokuvumela ukuvalwa kwezitalato / ukwanda kokutya ngaphandle nangona iMintel yophando (ngoSeptemba 2020) ukuba phantse iipesenti ezingama-60 zokutya zazingonwabanga ukutya ngaphandle. Ukukhuthaza ukutya ngaphakathi, iivenkile zokutyela zichithe isixa esikhulu semali ukufakela iinkqubo zokucoca umoya. Nokuba iinkqubo zokuhluza eziphambili ziya kukhuthaza idiner ukuba ibuye esidleleni ngamava-ngokutya amava akukagqitywa. Okwangoku, eli shishini ligxile ekutyeni-ukuya-ekuhambeni, inkonzo yokuhamba-hamba, kunye ne-curbside pickup.
Abahambi beshishini beziziko elikhulu lenzuzo kwiihotele, kwiinqwelomoya nakwiindawo zokutyela kwizixeko ezikhulu kwaye ukuthengiswa kwewayini kula macandelo akunakulindeleka ukuba babone ukukhula ngaphandle kwale marike. Kwixesha eliqikelelweyo le-2 + leminyaka yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, iihambo zeshishini zinokuba mfutshane kwaye zincinci ngemicimbi yorhwebo enkulu eza kuza kamva.
Ngokuka-Nielsen, kubiza i-1.02 yeedola nge-ounce eli-12 yokuhambisa ibhiya, $ 0.88 nge-1.45-ounce ekhonza imimoya kunye ne-1.51 yeedola nge-ounce e-5. Oku kuthetha ukuba iwayini ngama-72 eepesenti ebiza kakhulu ukuyikhonza kwaye ichaza ukuba kutheni ixabiso elisezantsi ngokukhonza liyinxalenye ecacileyo yebali lempumelelo lemimoya. Ngokutya okumbalwa kunye / okanye okuncinci okutyayo kunye neebhari ezixakekileyo, kunye nokwanda kokuthatha, kusenokwenzeka ukuba uluhlu lweziselo zotywala nalo luya kuncitshiswa kwaye lwenziwe lula.
Izinga lokukhula kweebhotile ezingama-750-mililitha zehlile kunye neepakeji ezincinci ezibandakanya iibhotile ezingama-375-milliliter, iipakethe zeTetra, iinkonkxa kunye neebhotile ezingama-500-milliliter. Ubungakanani obuncinci babukhula ekuthandeni kwangaphambili kwe-covid kwaye banokukhetha ukwamkelwa ukuya phambili.
Ukuba ibhotile yeemililitha ezingama-750 ayisathandwa kudala - yintoni ekhulayo? Iifomathi ezinkulu - yonke into engaphezulu kodidi lwethitha eli-1.5 ngakumbi iqela leelitha ezi-2 okanye ezi-3 ezibamba ibhegi yepremiyali-ebhokisini ngokukhula kweepesenti ezingama-50.
Ixabiso lokudlala ligxile ekunciphiseni iindleko zokupakisha. Njengabantu abathathe umhlala-phantsi, baya kujoyina amawaka ezigidi njengabathengi abangagcinanga mali kunye notshintsho ekusebenziseni nasekuchitheni; Nangona kunjalo, kunzima ukusela iwayini elungileyo kwaye utshintshele kumava asezantsi… yipremiyamu yeelitha ezi-3 ezihlangabezana nale mfuno. Abathengi abancinci abonga imali banokufumana ibhokisi ye-3-litre yokuthenga okuhle kunye nosapho oluncinci oluhlala ekhaya kwisidlo sasemini kunye nesangokuhlwa, ibhokisi yepremiyamu inokuba yimpendulo efanelekileyo.
IChardonnay iyaqhubeka ukuba yeyona nto idumileyo; Nangona kunjalo, izinga lokukhula kwalo liyaqhubeka nokuhla okungalunganga kwe-2.7; I-merlot ibonisa ukwehla okubi kakhulu- phantse iipesenti ezili-10. Ukuqhakaza kuphuma nge-rose ngenqanaba lokukhula kancinane ngaphantsi kwe-zero.
Ukudityaniswa okubomvu kubuyile kwi-2020 emva kokwehla kwi-2019 kwaye kwabonisa ukukhula kweepesenti ze-3.9. Ubumnandi, iwayini ezikhethekileyo zibonisa ukukhula okumangalisayo ngakumbi kwiwayini esekwe kwi-agave (iwayini eyenziwe nge-agave eluhlaza okwesibhakabhaka; iqiniswe ngokudityaniswa ne-blanco tequila) ephazamisa iindidi zewayini / zomoya kwaye idlale ukuthandwa kwe-tequila kunye nee-margarita ezibonisa ukukhula kweepesenti ze-100. I-Agave iwayini isezantsi etywaleni kune-tequila kwaye idlala kumthengi onengqondo yezempilo efuna iikhalori ezimbalwa. Imveliso ikwatsala abathengi baseSpain abaqhele imveliso ethengiswe eMexico. Ukuqhubeka nokuthandwa yiprococo, sangria kunye ne-sauvignon blanc.
I-Baby boomers (iipesenti ezingama-70 zengeniso elahlwayo kunye neepesenti ezingama-50 zobutyebi e-US) ziyaqhubeka ukuba ngabona bathengi bewayini. Okwangoku yipesenti enye kuphela yenqaku lokwahlulahlula ukusetyenziswa kwabo ukusuka kuGen X (owazalwa kwasekuqaleni ukuya embindini we-1960 ukuya ngasekupheleni kweminyaka yee-1970 ukuya kuthi ga ebutsheni bowe-1980) ngenxa yoko abanakuthathwa njengeqela eliphambili. I-Millennials (ezalwe phakathi kuka-1981 no-1996) lelona thuba likhulu lokukhula kwishishini lewayini lase-US abasandula ukuqala ukubonisa umdla kwicandelo lewayini. Eli liqela elifuna ukonwaba malunga newayini ukuze ishishini libone nawaphi na amaqondo okukhula anamava kwisithuba seminyaka engama-20 ukusukela ngo-1994 ukuya ku-2014.
I-Millennials ayisebenzi kudidi lwewayini yeprimiyamu nangona zinamandla ekuthengeni izinto zodidi; malunga neepesenti ezingama-20 zeli qela zisebenzisa iwayini nangona iipesenti ezingama-33 zithenga iimpahla zodidi. Uphando lubonisa ukuba iimillennials ziyacotha ukungena kwindawo yokuthenga iwayini yeprimiyamu ngenxa yokukhethwa kwangoko kwebhiya yobugcisa kunye nemimoya, imibuzo malunga nemicimbi yezempilo enxulunyaniswa notywala kunye nokulibaziseka ekusekeni amakhondo emisebenzi, iintsapho kunye nobutyebi xa kuthelekiswa nezizukulwana zangaphambili.
Umzi mveliso we wayini kufuneka uqaphele ukuba abathengi abancinci bafuna ngakumbi kwiimpawu abazixhasayo. Ngelixa ubume bokufuna i-boomers kufuneka babonakalise ubutyebi babo kunye nempumelelo, i-millennials ikhetha ukwaziswa malunga nomhlaba, imihla yokuvuna, i-pH, i-winemaker kunye nenqaku lewayini-ukuze babenako ukuvakala benolwazi phakathi kwabahlobo kunye noogxa babo ngaphandle kokuqwalaselwa njenge "show" ndicimile. ”
Iivenkile ezinomdla wokubamba icandelo lentengiso elincinci kufuneka zijolise kwimisebenzi yazo yentengiso kwimiba enjengobulungisa kwezentlalo, ubulungisa kunye nokwahluka, ukubuyisela amanzi kumanzi, ukuthintela ukusetyenziswa kwe-glyphosate, ukufumana isiQinisekiso se-LEED, kusetyenziswa iindlela ze-biodynamic kunye nezolimo. Ngeli xesha, phantse akukho lwazi oluvela kwiintengiso, kubudlelwane boluntu okanye kumkhankaso wentengiso okanye kwiiwebhusayithi zewayini.
Kule minyaka ilishumi izayo, ishishini lewayini liza kudlala into entsha. Kuza kubakho ukukhula okuqhubekekayo nabathengi baseTshayina kubandakanya iivenkile ezintsha (okt, iSilver Heights Vineyard / Ningxia Hui Autonomous Region; IGrace Vineyard / iShanxi Provence; Chateau Changyu AFIP Global / Miyun District, Beijing), kunye nokwanda kokusetyenziswa.
Utshintsho lwemozulu kunye nokwamkelwa kwetekhnoloji ngabalimi, abenzi bewayini kunye nabathengisi kuya kuba nefuthe kwindlela esithenga nesela ngayo iwayini. Utshintsho lwemozulu lwenza imimandla ye wayini emide xa ibonwa ingakulungelanga ukwenza iwayini. ISweden, iNorway neNetherlands baqala ukuvelisa iwayini ezikumgangatho wehlabathi ngenxa yeendlela ezifudumeleyo.
Ukusuka kwitekhnoloji, iidrones kunye neerobhothi ziya kwandisa ubukho bazo kwisidiliya. Itekhnoloji entsha iyayiphucula inkqubo ekhulayo ineenzwa emhlabeni ekhokelela kwinkqubela phambili kulawulo lomhlaba nasekuncedeni abalimi beediliya bagqibe elona xesha lilungileyo lokunkcenkceshela izidiliya. Ukubhabha iidrones kukhangela imiqondiso yezifo kunye nembalela kunye neerobhothi, ngezandla ezifana nesikere zihambisa isidiliya ukuya kuthena izidiliya.
Baninzi ngakumbi abenzi bewayini abaqala iindlela ezizinzileyo zokulima abanye besebenzisa amandla elanga kwiivenkile zewayini kwaye abanye bahlengahlengisa ulungiselelo lwamakhonkco kunikezelo kwizisombululo ezizinzileyo ze-eco eziya kunciphisa umkhondo wekhabhoni uphela.
Njengokuba umntu osela iwayini esiba lihlabathi, abakukhathalelanga ukubizwa okanye ukubila okanye ezinye izinto ezahlula iwayini. Bakhangela iwayini ekulula ukuyifikelela enencasa. Kwiimeko ezininzi, iimveliso zewayini ziyafana neempawu zemveli zesuphamakethi kwaye oko kuthetha ukuba iilebheli zewayini ziya kuba mnandi ngakumbi, zinobuchule kwaye zibalulekile.
Ukujongana nengxaki yomgunyathi wewayini, itekhnoloji idala inkqubo yokuqinisekisa kunye nethemba. Itekhnoloji ye-blockchain sisiseko esisasazwayo, esisasazwayo esigcina ukuvela kwempahla yedijithali esisigxina nengafumanekiyo, iyenza igqibelele njengendlela yokuqinisekisa ibhotile enqabileyo yewayini entle (okt, Chai Wine Vault).
Ungandinika enye iwayini okanye undiyeke. ” - URumi